Uguqula njani amaXesha eTwitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 310
Amakhulu emixholo ayafumaneka kwi-Twitter yonke imihla, ehlaziywa ngawo onke amaxesha, enkosi ngokuhamba rhoqo nokungapheliyo kweTweets. Ngapha koko, iqonga le-Twitter liqikelele ukuba ngaphezulu kwe-500 yezigidi zeTweets zipapashwa mihla le. Ukongeza, le nethiwekhi inika imisebenzi emininzi
Ngaphakathi ku-Twitter, uninzi lwemisebenzi luyafumaneka onokonwabela kuyo nayiphi na imeko. Phakathi kwale misebenzi kukho amaxesha adumileyo. La mathuba kwi-Twitter aqondwa njengamabali onokuthi uwabonise ngokulandelelana kwawo. Oko kukuthi, ibali elinye emva kwelinye ibali.
Amaxesha e-Twitter akunceda ukuba ubonise ulwazi olude kunokuba unokubonisa ngebali elinye. Nangona usuka kwi-App ye-Twitter ubona ukhetho "Amaxesha", Awuyi kuba nakho ukuyila ngale ndlela, kuphela kwiqonga lewebhu.
Qala ukudala umzuzu wakho kwi-Twitter
Ukudalwa kwamaxesha kwenziwa kwindlela oza kuyifumana kamva, ke qhubeka ufunda imigca elandelayo:
Khangela i icon
Ngena kwiakhawunti yakho ye-Twitter kwiphepha elisemthethweni. Skrolela ezantsi kwi "ezinye iinketho" icon. Ukucofa oku kuya kubonisa icandelo "lamaXesha amaXesha”.
Uyakwazi ukubona i icon ngohlobo lwesibane ukuya kwikona ephezulu ngasekunene kwekhusi kwifestile Iya kubonisa.
Nje ukuba ucofe le icon, kuya kuvela ithebhu entsha ngaphandle kwesithuba apho ungene khona kwi-Twitter, ukuze uqale ukuhlela umzuzu wakho.
Wenziwa njani umzuzu?
Uya kuba nomfanekiso-ngqondweni wezinto ezininzi ezenza ifayile ye- Okomzuzwana.
Iqala ngokubeka isihloko somzuzu kunye nenkcazo yayo.
Ukusuka kwicandelo eliphakathi ungalayisha umfanekiso. Inkqubo iqala ngokucinezela le bhokisi ukuze ukwazi ukukhangela umfanekiso kamva kwimemori yesixhobo. Uya kuba nakho ukujonga kwangaphambili umfanekiso. Oku kunokusebenza njengomfanekiso wekhava, apho unokukhetha khona iTwitter.
Ungahlela lo mfanekiso ukusuka kwi icon "Guqula umxholo wemultimedia weqweqwe".
Ukuya kwinxalenye ye Emazantsi konxibelelwano kwindalo okwangoku, iiTweets onokuzilayisha kuyo ziyafumaneka. Khetha phakathi kwee-Twwets ngeakhawunti, oyithandayo, ikhonkco kwiiTweets, unokwenza nokhangelo lwabo kwikona ephezulu ngasekhohlo ye-Tweet.
Ungasusa nayiphi na iTweet oyilayishileyo ngokucinezela umnqamlezo ongasentla kwayo. Kwelinye icala, ngesixhobo "nciphisa" unokuyihlengahlengisa iTwitter ngokobungakanani obuthile.
Ungafumana i icon yeentolo ezalathe ezantsi kwiTweet nganye ukuze uhambe uskrole. Oku kuyakuvumela ukuba uzibeke naphi na nanini na xa ufuna.
Nika ubumfihlo ngalo mzuzu ngokucinezela ukhetho "Yabelana ngomzuzwana ngasese." Ngale ndlela iya kufumaneka kuphela ngekhonkco olibonelelayo.
Ukugqiba, yiya nje kwi "papasha" icon. Iqonga liya kukuvumela ukuba ucwangcise ukupapashwa komzuzu "ukugqiba kamva".
1 Qala ukudala umzuzu wakho kwi-Twitter
1.1 Khangela i icon
2 Wenziwa njani umzuzu?
Uyeka njani ukulandela ijelo le-YouTube?